September 2017 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Samsung မြန်မာ font
Anonymous at 7:22:00 PM 0
SAMSUNG AIO Font Changer ( bat ဖိုင် ) for Service Only
(ဒါနဲ့ မနက်ဖြန် ပုသိမ် ရက်တို (၃) ရက် အတန်းစပြီနော် နောက်မှ မတက်လိုက်ရပဲနေမှာစိုးလို့ :D) >>> ဆက်သွယ်ရန် 09978075760
Download @ Download
Computer software Downloader
Microsoft Windows နဲ့ Office တွေကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ Download လုပ်နိုင်တဲ့ Tool
Maung Pauk at 12:47:00 AM 0
တော်တော်မိုက်တယ်ဗျ.. Windows နဲ့ Office ဗားရှင်းအမျိုးမျိုး၊ Edition အမျိုးမျိုးကို Region အလိုက် တစ်ချက်နည်းနဲ့ Download လုပ်နိုင်တယ်.. တော်တော့်ကို လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်.. Download Source တွေအားလုံး Official တွေချည်းပဲ..
Download Win&Office Download Tool : 357.4 KB
Android Tool Downloader Samsung
Samsung Firmware တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် Download လုပ်နိုင်မယ့် SamFirm Tool 0.3.4.0
Maung Pauk at 12:24:00 AM 0
SamFirm Tool ဟာ Samsung Firmware တွေကို သက်ဆိုင်ရာ Webpage တွေကနေ မှန်မှန်ကန်ကန် တိုက်ရိုက် Download လုပ်နိုင်ပါမယ်.. လိုချင်တဲ့ Model, Region အတိုင်း တိတိကျကျ ရှာဖွေနိုင်တဲ့တွက် Samsung တွေ Firmware မှားယွင်းတတ်မိတဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်...Tool ကိုစတင်အသုံးပြုတဲ့အခါ error တက်ခဲ့ရင် ပြထားတဲ့ error ကိုတော့ ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းတတ်ဖို့လိုပါမယ်..
Download SamFirm Tool 0.3.4.0 : 3.7 MB
Computer software Recorder
ZD Soft Screen Recorder v11.0.3
Maung Pauk at 9:30:00 PM 0
Windows PC သမားတွေ Screen Record လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါ.. လွယ်ကူတယ်.. ရိုးရှင်းတယ်.. Image ရော Video အနေနဲ့ပါ Record ယူနိုင်တယ်.. Resolution ကောင်းတယ်.. Screen ကို Windows Resolution အပြည့် ယူနိုင်တယ်.. ခလုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အမိန့်ပေးလို့ရအောင် Shortcut ကိုလည်း သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်... Video Record မှာ အသံပါ တစ်ပါတည်း သွင်းယူလို့ရတယ်..
Full Version ရယူနည်း
1. Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီး Record တစ်ချက်ယူကြည့်လိုက်.. Register Now ကိုနှိပ်..
2. Internet ပိတ်၊ Antivirus ကိုပိတ်.. Keygen ကို Run ပြီး ကီးယူပြီး ဖြည့်လိုက်ရုံပဲ..
( 1PC ကို 39 ဒေါ်လာတန်ကို Free သုံးနိုင်ပါပြီ.. )
Home Page : http://www.zdsoft.com/store/screen-recorder/
Download ZD Soft Screen Recorder v11.0.3.zip : 7.25 MB
SAMSUNG Firmware ဒေါင်းတာနဲ့ တင်တဲ့အခါ ဆရာကျကျလေးဖြစ်အောင် လုပ်နည်း Video ပါ (30MB)
@ http://pc.cd/y3n7 (အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်)အဆင်ပြေပါစေ..
OMH Mi Services Tool Ver 1.1 Free Version
Maung Pauk at 12:57:00 PM 0
Mi Account တွေကို Fastboot Mode မှတစ်ဆင့် Qloader 9008 Mode မှတစ်ဆင့် One Click ဖြင့် User Lock And Account ဖြည်နိုင်ပါတယ်...
ခုပေးလိုက်တာက Free Version ဖြစ်တာကြောင့် Account ပြည်သွားပေမယ် Wifi Bluetooth Error တစ်ချို့ရှိပါမယ် ..(အလုံးတိုင်းမဖြစ်ပါ).. လတ်တလောဖြည်လို့ရတဲ့ Devices List ကတော့
9008 ကဖြည်မယ် ဆိုရင် Enable Comport ကိုတစ်ချက် နှိပ်ပါ ပီးရင် ကိုယ်ဖြည်မဲ့ Model ကိုရွှေးပါ
9008/EDL ကိုထောက်ပါ Account Or Userlock ကိုယ်ဖြည်မဲ့ဟာရွှေးပါ Start နှိပ်ပါ :)
Credit : Omh_Min_Htet
Download OMH Mi Services Tool Ver 1.1 Free Version : 9.3 MB
Microsoft Windows နဲ့ Office တွေကို တစ်ချက်တည်းနဲ့...
Samsung Firmware တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် Download လု...
SAMSUNG Firmware ဒေါင်းတာနဲ့ တင်တဲ့အခါ ဆရာကျကျလေြး...